Fanandramana mandritra ny 28 taona mifantoka amin'ny fitaovana diamondra ho an'ny fikolokoloana sy ny famolahana gorodona.
Mikatsaha sy mandrisika hatrany ny fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpanjifa ary manantena ny hitombo miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Rafitra sy ekipa QC feno
QC eo an-toerana, Management Tracking Production, Management "6S", fiofanana matetika matetika hahazoana antoka ny kalitaony
Fanovana lalao EZshine Tough-Flex Polycrystal Technology
Ny pataloha EZshine dia afaka mitondra Fiainana indroa, 50% tahiry amin'ny asa, mazava kokoa ary gloss noho ny mpifaninana hafa. Fampisehoana faran'izay betsaka, fahombiazana faran'izay betsaka, tombony faran'izay avo indrindra ary fanjifana farafaharatsiny.
Rafitra pads feno. Misy vahaolana isan-karazany ho an'ny asa rehetra amin'ny gorodona rehetra.
Ny iraka ampanaovina anay ary ny fampanantenanay hanome vokatra tsara tsy tapaka ho an'ny mpanjifanay
Fotoana fanaterana ara-potoana sy haingana
Ny tsipika famokarana sy ny ekipa manokana dia hiantoka anao hahazo izay ilainao ara-potoana
Tranonkala, Gazety fanadiovana, tsenambarotra, hampiasa vola bebe kokoa izahay hanampy anao hanitatra ny tsena. Fitaovana ara-barotra ao anatin'izany ny Catalogs, Tools namboarina ho fanofanana, boky torolàlana ho an'ny mpampiasa farany, horonan-tsary ... ho hisokatra ho anao. Raha mbola afaka manampy anao hanitatra ny tsena izany dia hanohana anao amin'ny lafiny rehetra izahay
Mpivarotra ihany, tsy misy mpampiasa farany
Aza mivarotra velively amin'ny mpampiasa farany. Arovy hatrany ny tsenanao ho mpamatsy mahatoky. Ny fifanarahana manokana amin'ny tsena sasany dia misokatra ho an'ny fifanakalozan-kevitra
Pads polishing vita amin'ny beton, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kiraro fanaovana diamondra, Kiraro fitotoana PCD, Kiraro fitotoana beton,